Xiliga uu dib ugu soo laaban doono De Bruyne tababarka kooxda Manchester City oo lasii ogaaday – Gool FM
(Manchester) 15 Nof 2018. Wargeyska “Metro” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xiliga uu dib ugu soo laabanayo laacibka reer Belgiam ee Kevin De Bruyne tababarka kooxda Manchester City.
Kooxda Manchester City ayaa haatan ku hogaamineysa horyaalka Premier League 32 dhibcood, waxayna 2 dhibcood ka sareeyaan Liverpool oo booska kaalinta 2-aad ku jirta iyo 4 dhibcood ay ka sareyso Chelsea oo iyadana kaalinta 3-aad ku jirta.
Wargeyska ayaa sheegay in laacibka reer Belgiam ee Kevin De Bruyne u u dib ugu soo laaban doono tababarka kooxda Manchester City isbuuca soo aadan.
Sidoo kale wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Kevin De Bruyne uu ku soo bilaaban doono kusriga keydka kulanka West Ham ee ka tirsan kulamada 13-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Muxuu ka yiri C/laahi Shiikh Nuur xilka cusub ee maanta loo doortay